ဖိနပ် - Bezzia | Bezzia (စာမျက်နှာ 2)
ယခုအချိန်တွင်ဖိနပ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်အတူဖိနပ်လား သင်တို့အတွက်ဒီဇိုင်း ၉ ခုရွေးချယ်ထားသည်။
Naguisa သည်ဖိနပ်အသစ်စုဆောင်းမှုဖြစ်သော La Cabañaကိုတင်ပြသည်
Naguisa သည် ၂၀၁၂ နွေရာသီတွင်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ Claudia Pérez Polo နှင့်ဗိသုကာပညာရှင်မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်လူငယ်ဖက်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသောကုမ္ပဏီများအားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Genuins ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် ၁၀၀% လုပ်သည် ...
အရသာအမျိုးမျိုးအတွက် Zara ဖိနပ်အသစ်များစုဆောင်းခြင်း
Zara ရှူးဖိနပ်အသစ်များကိုရှာဖွေချင်ပါသလား။ သူတို့သည်လာမည့်အရာများအတွက်စုံလင်သည်။ မင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့။
ခေတ်မှီသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိရန်အတွက် Cowboy စတိုင်ဖိနပ် ၉ ခု
တနင်္လာနေ့တွင် Zara သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးစုဆောင်းမှုတွင်လောင်းကစားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက် Bezzia တွင်ဤလမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Zara သည် Cowboy စတိုင်ဘွတ်ဖိနပ်ကိုသူ၏နောက်ဆုံးထုတ်စုဆောင်းမှုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုသိချင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ကို Dad Sandals, Chunky Sandals သို့မဟုတ် Ugly Sandal ဟုလူသိများပြီးလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
မျက်မှောက်ခေတ် Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်ပရိသတ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့်စပိန်ဖိနပ်ဖိနပ်ဖြစ်သည့် Muroexe ၏ ...
Massimo Dutti ၏ဖိနပ်များရောင်းချသည်
Massimo Dutti ဖိနပ်သည်ရောင်းအားများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်လျော့နည်းစွာထုတ်လုပ်နိုင်သောအခြေခံနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောမော်ဒယ်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် eco ဖိနပ်သည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည်။
Esparto နှင့် raffia ဖိနပ်များ၊
Esparto နှင့် raffia ဖိနပ်များသည်အမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်ရာသီတစ်ခုသည်ပြောစရာများစွာရှိလိမ့်မည်။ သူတို့ကအများအပြားစတိုင်များပေါင်းစပ်လာကြ၏
၅၀% အထိသင်စုဆောင်းနိုင်သောမြင့်မားသောဘွတ်ဖိနပ် ၉ ခု
ရောင်းအားသည် ၅၀% လျှော့စျေးဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်မြင့်မားသောသားရေဘွတ်ဖိနပ်များကို ၀ ယ်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဆောင်းတွင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသော Xti ခြေကျင်းဖိနပ်
ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါ Xti ကဲ့သို့ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်း ဦး - ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၈ စုဆောင်းမှုတွင်ပါဝင်သည်။ မင်းကိုပြတယ်!
Converse နှင့် Bershka တို့ဖြင့် Miley Cyrus စုဆောင်းခြင်း
Miley Cyrus သည်တိုက်ပွဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Converse နှင့် Bershka နှင့် ပူးပေါင်း၍ အားကစားစုဆောင်းမှုတစ်ခုတွင်တွေ့မြင်ရသည်။ သူတို့ရဲ့အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေပါ။
ဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီဖိနပ်စုဆောင်းခြင်း
Mint & Rose သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်ဖိနပ်အနည်းငယ်နှင့်ပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေပါ။
ကြီးမားသောအင်အားဖြင့်နင်းနယ်နေသောတိရစ္ဆာန်ပုံနှိပ်ဖိနပ်၏ဤရွေးချယ်မှုကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။ မြွေ, ကျားသစ်နှင့် zebra ပုံနှိပ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကျဆုံးခြင်းကိုခံစားရန်အတွက်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်ထက် ပို၍ ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြင့်သင့်ကိုထားရှိပါသည်။ သင်နေ့စဉ်လိုချင်သည့်စတိုင်တိုင်းအတွက်နေ့စဉ်ဖိနပ်များ။
ခြေက Zara ဖိနပ်အသစ်စုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်
ခြေသည် Zara ဖိနပ်စုဆောင်းမှုအသစ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ ခြေနင်းဖိနပ် မှစ၍ မြင့်မားသောဘွတ်ဖိနပ်များ၊
၁၃ ဒေါ်လာထက်နည်းသော Stradivarius တွင်သင်၏ဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ပါ
မင်းရဲ့ဖိနပ်သက်တမ်းတိုးချင်ရင်အခုမယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းတွေတက်နေပြီ။ ၁၃ ဒေါ်လာထက်နည်းသော Stradivarius ဖိနပ်တစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
အရောင်း - လှပသောခြေနင်းဖိနပ် ၉ လုံး
ရောင်းအားတွင်သိသာသောအထူးလျှော့စျေးများဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်အလတ်စားဒေါက်ဖိနပ်များနှင့်ကြိုးရှည်ရှည်ပါသောခြေနင်း ၉ ချောင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော Massimo Dutti ဒေါက်ပေါင်းစပ်
Massimo Dutti ပြသထားသည့်ဒေါက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေပြီးပေါင်းစပ်ပါ။ သင်မတွန်းလှန်နိုင်သည့်ရောင်းချနေသည့်ဖိနပ်တစ်မျိုး။
Anthropologie သည်နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းဆိုင်များတွင်ဖိနပ်၊ အိတ်၊ လက် ၀ တ်ရတနာနှင့်ဆံပင်အပိုပစ္စည်းများကိုတွဲဖက်ပေးသည်။ တောက်ပသောအရောင်များအတွက်။
Mango ရှိဖိနပ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်တိုးတက်နေသည်
Mango ရှိဖိနပ်အရောင်းအဝယ်ကိုမမေ့ပါနှင့်၊ အားလုံးအရသာနှင့်အချိန်လေးများအတွက်ဖိနပ်မော်ဒယ်များ။ ဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်လဲ
ငါတို့အဘို့ငါတို့ရွေးချယ်သောUterqüeဖိနပ်၏ရွေးချယ်မှုကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။ ဖြစ်ရပ်အမျိုးမျိုးအတွက်စုံလင်သောဖိနပ်ဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မှသည်ဖြတ်လမ်းနှင့်ပလက်ဖောင်းများအထိ။ မင်းအကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ?
နွေရာသီကိုကြိုဆို 11 espadrilles
နွေရာသီတွင်သက်တောင့်သက်သာရှိရှိနှင့်စတိုင်ကျကျခံနိုင်သော espadrilles ၁၁ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားပါသည်။ သူတို့ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲသိလား။
သငျသညျသစ်ကို Pimkie စုဆောင်းမှု၏ဖိနပ်ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအခြေခံကောင်းတွေအပြင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စျေးနှုန်းတွေနဲ့အတူအမြဲကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါတို့သိတယ်။
သင်ရချင်သော Bershka ဖိနပ်
Bershka ဖိနပ်ကအရမ်းကိုသွားတယ်။ ဤရာသီသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမူလနှင့်အထူးဒေါက်ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုနေစဉ်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရောင်များဖြင့်ဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောအတွေးအခေါ်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ယခုတွင်သင်သည်တစ်ခုတည်းကိုသာရွေးရမည်။
Katy Perry ၏မူလဖိနပ်စုဆောင်းမှု
အဆိုတော်ကေတီပယ်ရီသည်အနည်းငယ်မျှသာသွားခဲ့သည်။ သူ၏ဂီတအပြင်သူသည်ဖက်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလောကသို့စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူ၏ဖိနပ်အသစ်စုဆောင်းမှုကိုတင်ဆက်သည်။ သငျသညျလစျြလြူရှုနိုင်သောအလွန်မူရင်းစိတ်ကူးများ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်တောက်ပသောအရောင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောခြေကျင်းဝတ်ဘွတ်ဖိနပ်သည်သင်၏ပုံပန်းသဏ္toာန်အားပုန်ကန်သောမှတ်စုတစ်ခုထည့်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါ၏မင်္ဂလာဆောင်ဖိနပ်ရွေးချယ်ရာတွင်ရှုပ်ထွေးစရာမလိုပါ။ ထိုသို့ပြုရန်သံသယများစွာကိုဖယ်ရှားပေးမည့်လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များကိုရိုးရှင်းစွာလိုက်နာပါ။ သူတို့ကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
Christian Louboutin သည် Star Wars မှုတ်သွင်းသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
Christian Louboutin သည် Star Wars မှုတ်သွင်းထားသောဖိနပ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါနအတွက်လေလံတင်လိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူလက်စွဲ။ XL ဖိနပ်
Xl ဖိနပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီ၏ဆောင်းရာသီတွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးယခုရာသီတွင်သူတို့ရှိနေသေးသည်။ ဤပို့စ်တွင်၎င်းတို့နှင့်မည်သည့်အဝတ်အစားမျိုးကိုပေါင်းစပ်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Massimo Dutti ဖိနပ်သည်အားကောင်းနေသည်
ယခုရာသီသစ်အတွက် Massimo Dutti ဖိနပ်နှင့်အတူခံစားပါ။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဘွတ်ဖိနပ်၊ ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်၊
ရာသီဥတုဖိနပ်နှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်သည်ယူရို (၃၅) ထက်မပြည့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
၃၅ ယူရိုထက်လျော့နည်းသောဆောင်း ဦး စီးဖိနပ်များနှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဖိနပ်အမျိုးအစားများကိုမမေ့ပါနှင့်။ ဖက်ရှင်နှင့် Asos မှတစ် ဦး စုဆောင်းမှု။
Minnie Mouse ဖိနပ်ကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရတယ်
Primark သည် Minnie Mouse ဖိနပ်၏တန်ဖိုးနည်းသောဗားရှင်းကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောတော်လှန်ရေးဖြစ်သည့်သင်၏အိမ်တွင်သင်ရှိနိုင်သည့်ဖိနပ်တစ်ရံ။
ဆောင်းပါး၏ဖိနပ် 'kitten heels'
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖက်ရှင်ဆောင်းပါးတွင်နောက်ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီရာသီဥတုဖြစ်သည့် 'kitten heels' အတွက်ကြယ်ပွင့်ဖိနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌သင်ဝတ်ဆင်မည့်ဖိနပ်များနှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်များ
လာမယ့်ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်လာသောအခါသင်ဝတ်ဆင်မည့်ဖိနပ်များနှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်များကိုရှာဖွေပါ။ မူလဒေါက်ဖိနပ်၊ ကြော့ကွင်းရှူးဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်မြင့်မားသောဖိနပ်
သင်ရှိချင်သော Massimo Dutti နွေရာသီဖိနပ်
Massimo Dutti မှတင်ပြသောနွေရာသီဖိနပ်များကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသင်ဤရာသီကိုလိုချင်မည်မှာသေချာသည်။ ခြေနင်းကနေဒေါက်မြင့်ဖိနပ်အထိ။
Tod ရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီ 2017
ယနေ့ Bezzia တွင် 2017 နှင့်နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီနွေရာသီနွေရာသီနွေရာသီနွေရာသီ - နွေရာသီ - နွေရာသီနွေရာသီတွင်အီတလီကုန်အမှတ်တံဆိပ် Tod's မှရရှိပါမည်။ ကြော့နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့။
ငါတို့အဘို့ငါတို့အဘို့လုပ်သောရောင်စုံဖိနပ်၏ရွေးချယ်ရေးလက်လွတ်မထားပါနဲ့။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မှသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့် loafers များသို့မဟုတ်အားကစားဖိနပ်များအထိဖြစ်သည်။
နွေ ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောသတ္တုဖိနပ်အချို့ကိုယူဆောင်လာသည်။ ငါတို့ခြေထောက်တိုင်းအတွက်စတိုင်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်အောင်တောက်ပမှုများစွာရှိသောအကြံဥာဏ်များ။
အဖြူရောင်ဖိနပ်သည်နောက်သို့ပြန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပုံစံ ၅ မျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
ဒီနေ့ခေတ်ဖက်ရှင်ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ကိုဖိနပ် ၅ ခုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာအဖြူရောင်ဖိနပ် ၅ လုံး။ သူတို့ကရာသီအတွက်ပြန်လာ!
Pompeii ဖိနပ်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ပျော်စရာ
သင်ကစနီကာဖိနပ်ကိုကြိုက်လား? ထိုအခါသင်သည် Pompeii စနီကာ ၁၀၀% စပိန်ဘာသာနှင့်အလွန်အေးမြ။ ပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ ပြီးတော့စျေးပေါတယ်။
လာမယ့်ခရစ်စမတ်အတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖိနပ်ကိုသင်ရှာနေပြီဆိုလျှင် Bershka ကယူလာသည့်ပါတီဖိနပ်များကိုမမေ့ပါနှင့်။
Sarah Jessica Parker ကသူမဖိနပ်စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုတင်ဆက်သည်
Sarah Jessica Parker တွင်ပါတီဖိနပ်အသစ်များစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့်ခရစ်စမတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
Mireia Playà, သက်သတ်လွတ်ဖိနပ်
သင်သက်သတ်လွတ်စားပြီးတိရိစ္ဆာန်မှဆင်းသက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုမသုံးချင်ဘူးလား။ ထို့နောက် ၁၀၀% သက်သတ်လွတ်စပိန်အမှတ်တံဆိပ် Mireia Playà၏ဖိနပ်ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
Mary Jane ဖိနပ်သည်အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်မှီဆန်းသစ်သောပုံစံများအတွက်ပုံစံအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
Hispanitas သည်၎င်း၏ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ 2016/17 စုဆောင်းမှုကိုတင်ပြသည်
Hispanitas မှဖိနပ်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီသစ်စုဆောင်းခြင်း။ လွဲချော်ရန်မ သင့်ရဲ့ဗီရိုအခြေစိုက်စခန်းကိုအသစ်ပြန်လုပ်ပါ
ကျဆုံးခြင်း 2016 အတွက်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်များကိုဆွဲယူပါ
၂၀၁၆ ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက် Pull and Bear ကုမ္ပဏီ၏ခြေနင်းဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်အသွင်အပြင်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးသောစုဆောင်းမှု
ဖိနပ်လမ်းကြောင်းသစ် 2016 - 2017
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီ 2016 နှင့်ဆောင်းရာသီ 2017 အတွက်ဖိနပ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဘာတွေလဲ
နွေရာသီ 2016 ဖိနပ်: Refresh, Lotusse, Clarks
၂၀၁၆ နွေရာသီအတွက်ဖိနပ်စီးခြင်း၏အဓိကလမ်းကြောင်းသည် Refresh, Lotusse သို့မဟုတ် Clarks ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများ၏လက်မှဖြစ်သည်
နွေရာသီ 2016 ဖိနပ်: Gioseppo, Parfois, Carolina Boix
နွေရာသီရာသီကိုမှတ်သားဖော်ပြမည့်ဖိနပ်စီးကြောင်းသည် Gioseppo ကဲ့သို့သောစုဆောင်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်
အမြတ်ရရန် Zara တွင်စနီကာလျှော့စျေး
စနီနာမရှိသေးဘူးလား။ ထိုအခါ Zara ရောင်းအား၏အားသာချက်ကိုယူ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်စုံရ,
နွေရာသီ 2016 ဖိနပ်: Zara, Lolablue, Xti
ဒီနွေရာသီမှာ Zara, Xti or Lolablue လို့အမည်ရတဲ့ဖိနပ်စုဆောင်းမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်
pompoms နှင့်အတူဖိနပ်, နွေရာသီဖိနပ်
pompoms နှင့်အတူဖိနပ်နွေရာသီအတွက်ဖက်ရှင်ဖိနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်ရွေးချယ်စရာအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
Jute espadrilles, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လည်တီထွင်သောဂန္
ဆိုင်ပြတင်းပေါက်တွေမှာဂျူутတွေအများကြီးတွေ့လား။ Jute espadrilles သည်နွေရာသီနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူပြီးရွေးချယ်စရာနှင့်ဖက်ရှင်ဆန်သောမော်ဒယ်များစွာရှိသည်။
ယခုရာသီတွင်မည်သည့်နွေရာသီစီးရီးများ ၀ တ်ဆင်ရမည့်ဖိနပ်မျိုးဖြစ်မည်ကိုသင်မသိသေးပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်ရွေးချယ်သောရွေးချယ်ခွင့်ကိုသင်လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။
Sophia Webster ၏မူလဖိနပ်
အကယ်၍ သင်သည်ဖိနပ်အဟောင်းဟောင်းကိုပင်ငြီးငွေ့ပါက Sophia Webster ၏လက်မှရရှိသောဤဖိနပ်အမျိုးအစားများကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်သည်အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လာမယ့်နွေရာသီ 2016 မှာသရုပ်ဆောင်မယ့်သူတွေကိုရှာဖွေပါ။
ဖိနပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, နွေ ဦး - နွေရာသီ 2016
Uterque, Zara, Xti, Gloria Ortiz ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများစုဆောင်းထားသည့် ၂၀၁၆ နွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီရာသီအတွက်ဖိနပ်စီးခြင်း၏အဓိကလမ်းကြောင်းအချို့ကိုရှာဖွေပါ။
Antonio Miróသည်နွေ ဦး ရာသီအတွက်သူ၏ဖိနပ်အသစ်စုဆောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်
2016 နွေ ဦး ရာသီအတွက်အန်တိုနီယိုMiróoဖိနပ်စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်
ဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်ÚrsulaMascaróနွေ - နွေရာသီ 2016
ÚrsulaMascaróသည်သူမအားသူမ၏နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီ ၂၀၁၅ တွင်ပြသထားသည့်ကြိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်လတ်ဆတ်သောငယ်ရွယ်သောအလှပြင်ဆိုင်များနှင့်ဖိနပ်များကိုပြသသည်။
María Teresa Campos သည်သူမ၏ပထမဆုံးဖိနပ်စီးကြောင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
ဤရောင်းအားများ၌သင်တွေ့ရမည့်အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါသည်။ ပါးလွှာသောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောဒေါက်ဖိနပ်ပါသောကတ္တီပါသို့မဟုတ်замောင်ခြေကျင်းဖိနပ်။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်!
Marypaz ပါတီဖိနပ် 2015-2016
Marypaz ပါတီဖိနပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစတိုင်၊ ဖက်ရှင်များစွာနှင့်ဈေးကြီးစွာဖြင့်ခရစ်စမတ်တစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်မှသည်ခြေနင်းများသို့မဟုတ်နားနေခန်းများအထိ
Converse ၏ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်စနီနာများကြိုက်သလား။ အားကစားသမားများနှင့်လူငယ်များကြားမှာကျော်ကြားတဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဖိနပ်ကတ်ပြားတစ်ခုလုံးကိုခင်ဗျားတို့ပြသပါတယ်။
မင်းခြေထောက်အတွက်ဖိနပ်မရှာနိုင်ဘူးလား။ အကယ်၍ သင့်တွင်ခြေထောက်များကြီးမားပါကဖိနပ်များကိုကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသည့်နေရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်
Gucci ဆံပင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ရိုးရာနှင့်အတူ Loafers
Letizia Ortiz နှင့်သူမ၏ခေတ်ဆန်သောဖိနပ်
ဒီနေ့ Letizia Ortiz ၀ တ်ထားတဲ့ဖိနပ်အသစ်ကိုလေ့လာကြတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သည်နောက်တဖန်သင့်ကိုမထိခိုက်စေရန်လှည့်ကွက် ၆ ခု
သင့်ရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်ကသင့်ကိုနာကျင်စေမယ်ဆိုရင်ဒီလှည့်ကွက်တွေကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်ခံစားမှုမခံစားရဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးဖနောင့်ကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏သားရေဖိနပ်များမှခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားရန်အကြံဥာဏ်များ။ ဤအကြံပြုချက်များနှင့်အတူသင်သည်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကဲ့သို့သောသင်၏ဖိနပ်အသစ်များကိုရရှိလိမ့်မည်!
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဂျပိန်ဘောင်းဘီကိုအမျိုးမျိုးသောဖိနပ်စတိုင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရတယ်။ ဘယ်ဟာလဲသိလား။ ပြီးတော့ငါတို့ပြောတာကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့
ဖိနပ်စီးခြင်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီ (II)
ဖိနပ်များ၊ ဖိနပ်ကုမ္ပဏီများ၏စုဆောင်းမှု - ဆောင်းရာသီ - ဆောင်းရာသီ 2015-2016 အတွက်
ဖိနပ်စီးကြောင်းပုံစံများ၊ ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ 2015-2016 (၁)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအတွက်ဖိနပ်စီးကြောင်း
ခုံဖိနပ်များနှင့် undercuts, နွေရာသီဖိနပ်
အဆိုပါပိတ်ဆို့မှုများနှင့်၎င်းတို့၏အပေါင်းအဘော်, undercuts, ဒီနွေရာသီ 2015 အတွက်ဖက်ရှင်ဖိနပ်ဖြစ်လာသည်။ သင်၏စံပြမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါကဝတ်ဆင်!
ဤနွေရာသီတွင်သင်၏ခြေထောက်ကိုဝတ်ဆင်ရန်သင့်အားဖိနပ်အမျိုးမျိုးကိုပြသသည်။ သစ်သား၊ ဖော့ဆို့၊ esparto နှင့်ရာဘာတံတားများ၊
၀ တ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ၊ အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး၊ အာကာသယာဉ်မှူး၊ ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အရိုးခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင်ပြေဆုံးနံရံကပ်ဆေးတံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
မင်းတို့အတွက်ရောဖိနပ် ၁၄ စုံစုံကိုမင်းတို့ရဲ့ဖက်ရှင်ဝတ်ဆင်ဖို့အရသာအမျိုးမျိုးနဲ့အိတ်ကပ်အားလုံးအတွက်ရွေးထားပါတယ်။
သင်၏ခြေထောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ရန်လှည့်ကွက်များ
ဒီနွေရာသီ 2015 အတွက်ဂေဟစနစ်ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်
သင်ဟာသတ္တုဖိနပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်အသွင်အပြင်နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တွေကိုရှာဖွေပါ။ ဒီနွေ ဦး ပေါက်မတိုင်မီဘယ်တော့မှမထွန်းလင်းပါနှင့်
Pikolinos Maasai လက်ထိုးဖိနပ်
Pikolinos 'Maasai ပရောဂျက်သည်အချိန်တိုင်းတွင်ရောင်စုံချည်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသောဖိနပ်စုဆောင်းမှုကိုပေးသည်။ ငါတို့ကိုမင်းတို့ပြမယ်
နယူး Nike Air ကို Huarache ... အလွန် glam!
Nike Air Huarache အသစ်သည်တူညီသောဒီဇိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအရောင်က၎င်းတို့ကိုသက်တမ်းတိုးစေပြီးအသစ်စက်စက်ဖိနပ်များကိုပင်မေ့သွားစေသည်
Jute espadrilles သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
ငါတို့သည်သင်တို့အလွန်အသုံးဝင်သောတစ်ဆင့်ချင်းအတူ jute espadrilles သန့်ရှင်းရေးကိုကူညီပေးပါတယ်။
ဖိနပ်နွေရာသီ - နွေရာသီ 2015 အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ရွှေ Birkenstock စတိုင်ဖိနပ်
H&M သည်နွေရာသီနွေရာသီ 2015 ဖိနပ်စုဆောင်းမှုတွင်ရွှေ Birkenstock ပုံစံဖိနပ်ရှိသည်။
ပလက်ဖောင်းဖိနပ်, နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီ 2015 လမ်းကြောင်းသစ်
ဒါကြောင့်လာမယ့်နွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီ 2015 ရာသီ hippie ဖက်ရှင်ဟာ ၆၀ နှစ်တွေရဲ့ဒဏ္icalာရီဆန်ဆန်ပလက်ဖောင်းတွေမှာမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ၀ င်ရောက်လာတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကသူတို့ကိုမှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များက၎င်းတို့ကိုအလွန်အမင်းလတ်တလောဖြစ်စေသည်။
Pikolinos ဖိနပ်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ
လာမယ့်နွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီအတွက် Pikolinos စုဆောင်းမှုကိုသင်ကြိုတင်ပြသထားတယ်။
ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Flat ဖိနပ်, ဖက်ရှင်?
အောက်စ်ဖို့ဒ်သို့မဟုတ်အားကစားစင်မြင့်များသည်ယခုနွေ ဦး ရာသီ၌ထပ်မံဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ နှစ်သိမ့်မှုကိုမစွန့်လွှတ်၊
ဗစ်တိုးရီးယားစနီကာသည်နှစ် ၁၀၀ ရှိပြီ
Dr. Martens ၏တကယ့်ဖိနပ်များကိုတုပခြင်းမှအသိအမှတ်ပြုရန်လှည့်ကွက်အချို့ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
Dr. Martens ၏ဖိနပ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဒီနေ့မှာတော့ Dr. Martens ရဲ့ဖိနပ်ကိုသဲလွန်စမပေးဘဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အကြံဥာဏ်တချို့ပေးပါတယ်။
ဇာထိုး -up ဖိနပ်သို့မဟုတ် bluchers, ယခုရာသီမရှိမဖြစ်
ယောက်ျား၏အပြာရောင်သို့မဟုတ်ဇာဖိနပ်သည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီရာသီဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလမ်းဘေးရုပ်ပုံများဖြင့်မည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ပါတီဖိနပ်အမျိုးမျိုးကိုပန်းရောင်ဖြင့်တွေ့နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းများ၊ ဇာပါသောဖိနပ်များနှင့်ဘဲလေးများတောင်မှဥပမာအချို့ဖြစ်သည်
ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီအတွက်ဖိနပ်စုဆောင်းခြင်း
ဆောင်း ဦး - ဆောင်းရာသီ 2014-2015 ရာသီ၏ဖိနပ်စုဆောင်းမှု၏ပြန်လည်သုံးသပ်
ရှေ့တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုသူများပါ ၀ င်သည့် stackable boxes များအပါအ ၀ င်ဖိနပ်များကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။
Callahan အမှတ်တံဆိပ်သည်အမျိုးသားများအတွက်အေးမြသောသားရေခြေနင်းဖိနပ်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးမြို့ပြဒီဇိုင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည်။
Tommy Hilfiger ခြေညှပ်ဖိနပ်သည်ကမ်းခြေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Tommy Hilfiger အသစ်ဖိနပ်စီးတံဆိပ်သည် Summer4မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးကမ်းခြေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နွေ ဦး ရာသီ 2014 လိပ်ပြာများကမှုတ်သွင်းဖိနပ်
Sophia Webster၊ Brian Atwood နှင့် Tabitha Simmons တို့သည်သူတို့၏ Spring 2014 collection များတွင်လိပ်ပြာဖိနပ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။
လွမ်းဆွတ်မိန်းကလေးများအတွက် Zara retro ပိတ်ဆို့
Zara သည်၎င်း၏ catalog တွင်မိန်းကလေးများအတွက်မူလပိတ်ဆို့ခြင်းအချို့ရှိသည်။
Badgley Mishka သတ္တုအလှအသုံးအဆောင်သတို့သမီးဖိနပ်
Badgley Mishka ၏စုဆောင်းမှုအတွင်းတွင်သန္ဓေသားအသုံးအဆောင်များပါ ၀ င်သောသတို့သမီးဖိနပ်ပါ ၀ င်သည်။
အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက်မင်းမဝတ်သင့်တဲ့ဖိနပ် ၄ ခု
အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သင်၏မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်၊ အဝတ်အစား၊ ဒီနေ့ဘယ်လိုဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ဖိနပ်အမျိုးအစားမျိုးကိုငါတို့ပြောပြပါလိမ့်။
ရွှေရောင်ဖိနပ် ၃ ခု၊
အထူးဖိနပ်လိုသူများအတွက် Splendid အရိုးအထူးကုဖိနပ်များစုဆောင်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်သင်၏ခြေကိုဖြေလျော့စေလိုပါကအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ Devalverde ၏အိမ်ဖိနပ်များထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒီနေရာမှာ Kalenji နဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးပြေးနိုင်အောင်ဒီနေ့မင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးစနီနာတွေသင်ပေးတယ်။
Zara ဖိနပ်၊ နွေ ဦး ရာသီအတွက်စုဆောင်းမှုအသစ်
လာမယ့်နွေ ဦး ရာသီအတွက် Zara ရှူးဖိနပ်အသစ်များ၊ အနက်နှင့်အဖြူစည်းမျဉ်းကိုပြသပါမည်။
ငါတို့သည်သင်တို့သပ်, ဖက်ရှင်ဖိနပ်နှင့်အတူ Sneaker အချို့မော်ဒယ်များပြသပါ။
Pikolinos ဖိနပ်, 50% လျှော့စျေး
Pikolinos အမျိုးသမီးစီးဖိနပ်စုဆောင်းမှုအပေါ်ယခုလျှော့စျေး ၅၀% အထိခံစားပါ
'70s မှစတိုင်ဖိနပ်: စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များ
Nagore ၏အစိမ်းရောင် Marden ပြီးနောက် - ဂေဟစနစ်နှင့်စတိုင်ကျလှသောဖိနပ်
Menorcan အမှတ်တံဆိပ် Nagore ၏ဖိနပ်နှင့်လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမှမဖုံးကွယ်ထားပါ။ Us …
မင်းရဲ့ charleston စတိုင်ဖိနပ်ရှိပြီးသားလား
ရာသီသတ်မှတ်ထားသည့်“ it” မိန်းကလေးများသည်သူတို့၏အံ့သြဖွယ် charleston စတိုင်ဖိနပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်မပြုပါ။
ဒီနွေ ဦး ရာသီအတွက် Ballerinas နှင့် Wedges
၂၀၁၁ ခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီအတွက်သပ်သပ်ရပ်ရပ်များနှင့်ဘဲလေးနာများရွေးချယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်